မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိသမျှ မဟာဓာတ်အားလိုင်း အားလုံးဟာ သမားရိုးကျ အေစီဗို့အား ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဓာတ်အားဆုံးရှုံးမှု အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ ဒီစီမသုံးသလဲဆိုတော့ အလွန်ဈေးကြီးလို့ (High Capital Cost ကနဦးရင်းနှီးငွေ) ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၈၉၁ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၁၀၀ ကျော်ကတည်းက HVDC မဟာဓာတ်အားလိုင်း နည်းစနစ်ကို အသုံးပြုခဲ့ကြပေမယ့် အလွန်ဈေးကြီးတဲ့အတွက် မဂ္ဂါဝပ်ထောင်နဲ့ချီတဲ့ လျှပ်စစ်ပို့ဆောင်ဖို့ ခရီးမိုင်ထောင်နဲ့ချီဝေးတဲ့ ဓာတ်အားပို့လွှတ်ခြင်းများမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒါမှ စရိတ်ကာမိမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသနပြုချက်များအရ ခရီးအကွာအဝေးနည်းရင် ဓာတ်ကြိုးနဲ့ ထရန်စဖော်မာများမှာ လျှပ်စစ်ဆုံးရှုံးမှုများက AC မဟာဓာတ်အားလိုင်းများက သင့်တော်ပေမယ့် ခရီးအကွာဝေး ကီလိုမီတာ ၂၀၀ ကျော်လာရင် HVDC မဟာ ဓာတ်အားလိုင်းက ဆုံးရှုံးမှုနည်းကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် 0(Source ABB 400KV report: https://goo.gl/6cgrng). အသုံးပြုတဲ့ ဗို့အားက မြင့်လေလေ ဆုံးရှုံးမှုကလည်း နည်းလေလေဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်အား အမြောက်အမြား ခရီးဝေးပို့လွှတ်တဲ့အခါ capital cost ကနဦးရင်းနှီးငွေ ကြီးပေမယ့် HVDC ကိုပဲ အသုံးပြုဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်။
ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အလွန်လိုအပ်နေချိန်မှာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများက ဓာတ်အားဝယ်ယူခြင်းကို မဖြစ်မနေ ဝယ်ယူသုံးစွဲရပါတော့မယ်။ အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက အိန္ဒိယ နိုင်ငံကနေ ဓာတ်အား မဂ္ဂါဝပ်ထောင်နဲ့ချီပြီး ဝယ်ယူသုံးစွဲရပါတယ်။ မလုံလောက်တဲ့အတွက် နီပေါမှာ ရေအားလျှပ်စစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရသလို ကျောက် မီးသွေးဓာတ်အားရုံများသာမက ၂၀၁၈ မှာ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ မဂ္ဂါဝပ်ရဖို့ နျူကလီးယား ဓာတ်အားပေးရုံ စတင်တည်ဆောက်နေပါပြီ။ ဒါလဲ မလုံလောက်သေးတဲ့အတွက် တရုတ်ပြည်က ဓာတ်အား ၁၅၀၀ မဂ္ဂါဝပ် ဝယ်ဖို့ ၂၀၁၈ မှာ MoU စာချုပ်လိုက်ပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံကို ဖြတ်သန်းသွားမယ့် HVDC မဟာဓာတ်အားလိုင်း တည်ဆောက်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကို လျှပ်စစ်ရောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကတော့ ဓာတ်အားဖြတ်သန်းခပဲရရှိပြီး၊ တရုတ်က မဝယ်ဘဲ လာအိုနိုင်ငံကဝယ်ဖို့ MoU စာချုပ်ချုပ် လိုက်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို သွယ်တန်းမယ့် တရုတ်မဟာဓာတ်အားလိုင်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို ကန့်လန့်ဖြတ် ဖြတ်သန်းသွားတဲ့ ဓာတ်ငွေ့နဲ့ ရေနံပိုက်လိုင်း မြေနေရာမှာပဲ တည်ဆောက်ရမယ်။ ဒါမှ တောင်သူတွေကို မြေလျော်ကြေးပေးစရာမလိုဘဲ အစိုးရချင်းပဲ ဖြေရှင်းရပါမယ်။ လာအိုနိုင်ငံက လျှပ်စစ်မဟာဓာတ်အားလိုင်းကတော့ ဘယ်လိုဆွဲမယ် မသိနိုင်သေးပေမယ့် အဲဒီဓာတ်အားလိုင်းပြီးရင် အာဆီယံနိုင်ငံများ မဟာဓာတ်အားလိုင်း သွယ်တန်းပြီး ဖြစ်သွားပါမယ်။ ဒါကြောင့် လာအို (အာဆီယံ) မဟာ ဓာတ်အားလိုင်းကို မြန်မာအစိုးရက ပိုပြီး အလိုရှိမှာပါ။
ဓာတ်အားလုပ်ငန်း ကဏ္ဍကြီး ၃ ခု
လျှပ်စစ်ပညာရှင်များနဲ့ သုံးစွဲသူများအတွက် လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ ၃ ပိုင်းရှိတာ သိကြပါတယ်။ ထုတ်လုပ်ရေးပိုင်း Power Station၊ မဟာဓာတ်အားလိုင်း Grid နဲ့ ဖြန့်ဖြူးရေး Distribution တို့ဖြစ်ပါတယ်။ အခုရေးမယ့် အကြောင်းကတော့ မဟာဓာတ်အားလိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရာ ဓာတ်အားပေးရုံကနေ နယ်မြေ၊ ပြည်နယ်တိုင်းများစွာကို ဖြတ်သန်းပြီး အသုံးပြုသူဆီအထိရောက်အောင် အလွန်မြင့်မားတဲ့ ဗို့အားနဲ့ တာဝါတိုင်ကြီးများနဲ့ ပို့ဆောင်တဲ့ စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ မဟာဓာတ်အားလိုင်းမှာ အေစီ AC နဲ့ ဒီစီ DC ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ မူလပထမ မဟာဓာတ် အားလိုင်းများဟာ အလွန်ဗို့အားမြင့်တဲ့ အေစီဓာတ် အားလိုင်းများကိုတောတောင်၊ ရေမြေဖြတ်ကျော်ပြီး သွယ်တန်းကြပါတယ်။ ဗို့အားက ၁၁ ကေဗီ၊ ၃၃ ကေဗီ၊ ၂၃၀ ကေဗီနဲ့ ၅၀၀ ကေဗီတွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဗို့အား နိမ့် ၃.၃ ကေဗီ၊ ၁၁ ကေဗီစတဲ့ လိုင်းများနဲ့ သွယ်တန်းတဲ့အခါ ဓာတ်အားဆုံးရှုံးမှုများပြားတဲ့ အတွက် နောက်ပိုင်းမှာ ၂၃၀ ဗို့ (သို့မဟုတ်) ၅၀၀ ဗို့ အေစီ မဟာဓာတ်အားလိုင်းများနဲ့ သွယ်တန်းပို့ဆောင်ပါတယ်။
မဟာဓာတ်အားလိုင်းများမှာ ဗို့အားမြင့်မားစွာ အသုံးပြုရခြင်းက ဓာတ်အားသယ်တဲ့ ကြေးနီကြိုးမှာ အပူဓာတ်အဖြစ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဆုံးရှုံးမှုများကို နည်းပါးစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြေးနီကြိုးရဲ့ ခုခံမှု Resistance ကြောင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများဟာ ကြေးနီကြိုးပေါ် အပူဓာတ်အားအဖြစ်ဆုံးရှုံးပါတယ်။ Loss = I²/R ဖော်မြူလာအတိုင်း ကြေးကြိုး ခုခံမှု Resistance များရင် ဆုံးရှုံးမှုများပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗို့အားအမြင့်ဆုံးနဲ့ပို့လွှတ်ရင် လျှပ်စီး Current “I” နည်းပါးသွားမှာဖြစ်လို့ ဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မဟာဓာတ်အားလိုင်းများမှာ ဗို့အားမြင့်မားနိုင်သမျှ မြင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အထက်ပါ ဖော်မြူလာ Loss = I²/R အရ ကြေးကြိုးရဲ့ ခုခံမှုနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် သတ္တုနည်း ပညာကိုအသုံးပြုပြီး အနည်းဆုံး ခုခံမှု ဓာတ်ကြိုးဖြစ်ရပါတယ်။ ဗို့အားလည်း အမြင့်ဆုံး ၅၀၀ ဗို့အထိ သုံးကြပါတယ်။
ပထမပိုင်းမှာ အေစီ AC မဟာဓာတ်အားလိုင်းများကို အများဆုံး အသုံးပြုကြပါတယ်။ ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်းမှာ ဒီစီ DC မဟာဓာတ်အားလိုင်းက ဓာတ်အားဆုံးရှုံးမှုကို ပိုမိုသက်သာစေတာ တွေ့ရှိကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အလွန်ဝေးကွာလှတဲ့ နေရာဒေသကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပို့ပေးရမယ်ဆိုရင် သမားရိုးကျ အေစီမဟာဓာတ်အားလိုင်းထက် ဒီစီမဟာဓာတ်အားလိုင်း HVDC နည်းက ရေရှည်မှာ စရိတ်ပိုသက်သာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခရီးဝေးတဲ့ နေရာများကို HVDC မဟာဓာတ်အားလိုင်းကို အသုံးပြုကြရပါတယ်။
DC မဟာဓာတ်အားလိုင်း ကုန်ကျစရိတ်
HVDC စနစ်များကို Alstom, Siemens, ABB ကုမ္ပဏီကြီးများက ထုတ်လုပ်ရောင်းချကြပါတယ်။ အသေးစိတ်လိုအပ်ချက်များကတော့ ကုမ္ပဏီနဲ့ အသုံးချမယ့်နိုင်ငံရဲ့ လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီး ဆွေးနွေးရပါတယ်။ ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်များကတော့ Power Rating, Circuit Length, Overhead vs. Cabled Route, Land Costs, and AC Network Improvements Required at Either Terminal စသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးတို မဟာဓာတ်အားလိုင်း သွယ်တန်းရင် အေစီနဲ့ ဒီစီ ဘယ်စနစ်ကသာသလဲ ပြောလို့မရပါဘူး။
ဒီစနစ် ၂ ခု နှိုင်းယှဉ်ဖို့ အချက်လက်များစွာ ရနေပါပြီ။ ဥပမာ .. အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြား အင်္ဂလိပ်-ပြင်သစ် 8GW, 40km မဟာဓာတ်အားလိုင်း စက်ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ် Equipment costs fora2000 MW 500 kV bipolar conventional HVDC အတွက် . . .
- Converter stations ~£110M (~€120M or $173.7M)
- Subsea cable + installation (~€1.2M or ~$1.6M/km) ကုန်ကျပါတယ်။ စုစုပေါင်း မဟာဓာတ်အားလိုင်း ၄ လိုင်း ကုန်ကျစရိတ်က £750M ကျသင့်ပါတယ်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဧပြီလ 2,000 MW, 64 km စပိန်နဲ့ပြင်သစ် HVDC မဟာဓာတ်အားလိုင်းက €700 million ကုန်ကျပါတယ်။ လိုဏ်ဂူဖောက်ခြင်းအပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။
အေစီ သမားရိုးကျ မဟာဓာတ်အားလိုင်းများကတော့ ထရန်စဖော်မာနဲ့ ဗို့အားအဆင့်ဆင့် နှိမ့်ချပြီး သုံးစွဲသူများထံ ပို့ပေးပါတယ်။ HVDC မဟာဓာတ်အားလိုင်းမှာလည်း ထရန်စဖော်မာ လိုအပ်ပါတယ်။ Convert Transformer လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဓာတ်အားများကို အေစီနဲ့ ဒီစီ အပြန်အလှန်ပြောင်းတဲ့ ဓာတ်အားခွဲရုံကို ကွန်ဗက်တာစတေရှင်း Convert Station လို့ခေါ်ပါတယ်။ အေစီကနေ ဒီစီပြောင်းတာကို Rectifier လို့ခေါ်ပြီး၊ ဒီစီကနေ အေစီပြောင်းတာကို Converter လို့ခေါ်ပါတယ်။ Line-Commutated Converters LCC လို့ခေါ်ပါတယ်။ Bridge Rectifier ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမကာလများမှာတော့ mercury-arc valves များကို အသုံးပြုပြီး၊ ၁၉၇၀ နောက်ပိုင်း သိုင်ရွိုင်စတာ thyristor valve ကို သုံးကြပါတယ်။ ယခု HVDC များမှာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရအလွန်ခက်ခဲတဲ့ mercury-arc valves ကို လုံးဝမသုံးတော့ဘဲ thyristor valve ကိုပဲ အသုံးပြုပါတော့တယ်။
Thyristor Valve တစ်ခုမှာ Thyristor များစွာ ပါဝင်ပြီး၊ Convert Transformer အဖြစ် အသုံးပြုတဲ့အခါ double circuit application, parallel valve groups., series valve groups စသဖြင့် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး သုံးကြပါတယ်။ မဟာဓာတ်အားလိုင်း ဓာတ်အားဆုံးရှုံးမှုနဲ့ ငွေကုန်ကျမှု (the annual energy losses and costs forapower transfer) တွေ သုတေသနပြုချက်များအရ ဗို့အားမြင့် UHVDC လိုင်းက HVDC ထက် စွမ်းရည် Efficencies အများကြီးမြင့်မားပါတာကို တွေ့ရပါတယ်။ 600KV, UHVDC system 92,08% efficiency ရှိပြီး 500KV, HVDG ကတော့ 72,39% and 88,84% efficiencies ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ (Source: https://goo.gl/5n4Q1h)
UHVDC Ultra High Voltage
ဗို့အား 500KV ထက်များရင် Ultra လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ ABB ပထမဆုံး 800KV, 1907 Km UHVDC မဟာဓာတ်အားလိုင်းကို တရုတ်ပြည် Xiangjiaba – Shanghai မှာ တပ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ စုစုပေါင်း 1907 Km ရှည်ပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ 600kV, 1,100km UHVDC မဟာဓာတ်အားလိုင်းကို Oklahoma – Tennessee အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ တည်ဆောက်ပြီးခဲ့ပါတယ်။
အင်ဒတ်တာ Inductor များကြောင့် ရီအက်တစ်ပါဝါ Reactive Power များကို Capacitor များနဲ့ ပြန်လည်ချေဖျက်ပြီး Power Factor ကောင်းအောင်၊ လျှပ်စစ်အလေအလွင့် အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ထိန်းကျောင်းပေးပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ အီလက်ထရိုမဂနက်တစ် (လျှပ်စစ်သံလိုက် ဓာတ်များ) ကြောင့် Harmonics and filtering ကိုလည်း လုပ်ရပါတယ်။ Filter အမျိုးအစားကလည်း ကွန်ဗတ်တာအမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲအသုံးပြုရပါတယ်။ မဟာဓာတ်အားလိုင်းက မြေပေါ်မှာ သွယ်တန်းသလို၊ မြေအောက်၊ ရေအောက်များမှာလည်း တည်ဆောက်ကြပါတယ်။ ကမ်းလွန်ရေနံလုပ်ငန်းများအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ရေအောက်မဟာဓာတ်အားလိုင်းဆွဲပြီး ပို့ပေးကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက ကြွယ်ဝတဲ့ ရေအားလျှပ်စစ်ကို ရေရှည်အတွက် ရင်းနှီးမြှပ်နှံဖို့ ကူညီမယ့်ချေးငွေများစွာ လိုနေပါတယ်။ ကျောက်မီးသွေး ဓာတ်အားပေးရုံများ တည်ဆောက်တဲ့ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားကုမ္ပဏီများရဲ့ စာချုပ်များကလည်း ရေရှည်မှာ လျှပ်စစ်ဈေးကြီးသွားနိုင်တဲ့ မမျှတတဲ့ စာချုပ်များဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ ဓာတ်ငွေ့၊ အယ်အင်ဂျီ ဓာတ်အားစက်ရုံများ တည်ဆောက်ခြင်းလည်း ရင်းနှီးငွေလိုပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများက လျှပ်စစ်ဝယ်ယူခြင်းက ဘေးအကင်းဆုံး ယာယီအဖြေဖြစ်ပါတယ်။
လျှပ်စစ်ဝယ်ယူဖို့ အာဆီယံ မဟာဓာတ်အားလိုင်း ပုံကို ကြည့်လိုက်ရင်၊ ထိုင်း-မြန်မာ မိုင်၂၀၀ လောက်ပဲ သွယ်တန်းဖို့လိုတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ US$ 192 millions ကုန်ကျပါမယ်။ အထွေထွေစရိတ် အကုန်အကျအများဆုံး ၂၇% (US$ 52 million) ကုန်တယ်ပဲ ထားလိုက်။ US$ 244 million ကုန်ပါမယ်။ ABB ပစ္စည်းတွေ သုံးပြီး၊ အမေရိကန်နည်းပညာ သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နည်းပညာနဲ့ မဟာဓာတ်အားလိုင်းဆိုရင်လည်း အတူတူပဲကုန်မှာပါ။ ချေးငွေအတိုးများပြီး၊ မြန်မာအလုပ်သမား၊ တက်ကနီရှင်တွေ အလုပ်မရတာပဲ အဖတ်တင်ပါမယ်။
တရုတ်နိုင်ငံမှ HVDC (သုံးသပ်ချက်)
မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော့ ဈေးကြီးလွန်းလို့ မသုံးနိုင်သေးပါဘူး။ အလွန်ကြီးမားတဲ့ မဟာဓာတ်အားလိုင်း မိုင်ရာ၊ ထောင်ချီခရီးကို အေစီ-ဒီစီ ပြောင်းပြီး ပို့လွှတ်ပါတယ်။ Efficiency ကောင်းပြီး၊ လျှပ်စစ်လေလွင့်မှု အလွန်နည်းပါတယ်။ ဈေးအလွန်ကြီးပြီး US$ 506 million ကုန်ကျပါတယ်။ 500kv, 600kv မဟာဓာတ်အားလိုင်းအကြီးစားတွေမှာပဲ သုံးပါတယ်။ ဘရာဇီးနိုင်ငံက ±600 kV, 3150 MW အကြီးဆုံး HVDC လိုင်းက အရှည် ၁၄၇၆ မိုင်နဲ့ အရှည်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ Three Gorges - Changzhou က ၈၉၀ ကီလိုမီတာရှည်ပြီး 500KV, 3000 MW အိန္ဒိယ Talcher-Kolar ကတော့ ၁၄၅၀ ကီလိုမီတာရှည်ပြီး၊ 500 KV, 2500 MW ပို့လွှတ်ပါတယ်။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး လျှပ်စစ်သုံးတာ 3192 MW ပဲ ရှိပါသေးတယ်။
အသုံးများတဲ့ မဟာဓာတ်အားလိုင်းသုံးတဲ့ ပစ္စည်းများကတော့ Siemens, ABB ၂ခုပဲ ဖြစ်ကြပြီး၊ ဂျပန်မှာတော့ Hitachi, Toshiba, Mitsubishi တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အခု တရုတ် - ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် မဟာဓာတ်အားလိုင်းက စုစုပေါင်း ကီလိုမီတာ ထောင်နဲ့ချီပြီး သွယ်တန်းရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် HVDC လိုင်းကို သုံးမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လျှပ်စစ်ပညာရှင်များ အလွန်နည်းပါးလှပါတယ်။ ပြည်ပမှာရောက်နေသူများရှိပေမယ့် ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံခြားပညာရှင်များကပဲ ဒီဇိုင်းလုပ်၊ တည်ဆောက်ကြပါတယ်။ စာရေးသူကိုယ်တိုင်လည်း ဒီလိုနည်းပညာအသစ်များ အတွေ့အကြုံမရှိပါဘူး။ နိုင်ငံခြားပညာရှင်များထံက လေ့လာဆည်းပူးရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပညာရှင်များက နိုင်ငံခြားပညာရှင်များနဲ့အတူ တွဲလုပ်ကိုင်ရင် နောက်ပိုင်း မြန်မာ့လျှပ်စစ်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို မြန်မာများပဲ ဦးဆောင်တည်ဆောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ အာဆီယံမှာ အလွန်ရှည်လျားတဲ့ HVDC မဟာဓာတ်အားလိုင်း မရှိသေးပါဘူး။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအတွက် တရုတ်-ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှလိုင်းက အရှည်ဆုံး၊ ပထမဆုံး ဖြစ်လာမှာပါ။
- မဟာဓာတ်အားလိုင်းအကြောင်း (ကုန်ကျငွေ၊ ပြည်ပနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ရပ်ကျေးများသို့ ပို့လွှတ်ခြင်း) https://goo.gl/G8GVBR
- ဝီကီပီဒိယာနှင့် အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ